Guddiga doorashooyinka oo shaaciyay waqtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare ee Gobolada Waqooyi – STAR FM SOMALIA
Guddiga doorashooyinka oo shaaciyay waqtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare ee Gobolada Waqooyi
Guddiga doorashooyinka dadban ee gobolada waqooyi ayaa shaaciyay waqtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare ee matalaya gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya.
Guddiga oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ay dhici doonto 24 bishan.
Maalinta sabtida ee soo socoto ayayna ku beegan tahay waqtiga gudiga ay shaaciyeen in la dooranayo xubnaha aqalka sare ee deegaanada Somaliland.
Waxaa muuqanaysa in dib u dhac kale uu ku imaanayo xiliga lagu balamay in doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa la qabto.
Gudiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa sheegay in hadda meel wanaagsan ay marayso doorashada xildhibaanada matalaya deegaanada waqooyiga Soomaaliya.
Doorashada sanadkaan ayaa marar badan waxaa ku yimid dib u dhac, waxaana dib u dhacyada ay sababeen iney niyadjab dareemaan shacabka iyo musharixiinta tartameysa.
Isbitaal uu leeyahay Xoogga Dalka oo laga furay Magaalada Baledweyne (Daawo Sawiro)
Weerar Khasaare geystay oo ka dhacay duleedka Magaalada Baledweyne